Halkan ka akhriso khudbadii taarikhga ahayd ee madaxweynaha Somaliland ee 18 May 2013 | Somaliland Hargeisa City
Halkan ka akhriso khudbadii taarikhga ahayd ee madaxweynaha Somaliland ee 18 May 2013
18 May, 2013 — somaliland1991
Guud ahaan waxaan dadkayga ku bogaadinayaa gudo iyo dibedba dabaal degga sannad guurada 22aad ee aasaaskii Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa Nabad-gelyada iyo Nimcada uu ina siiyey iyo horumarka uu ina waafajiyey.
Waddan xor ah, Nabdoon isla markaana Dimuqraadiya.
Waa waddan ina deeqa oo inagu fillan.
Waa waddan ay dadkiisu gacmahooda ku dhisteen.
Waa waddan ay dadkiisu ilaashanayaan.
Waa waddan ay Dunidu ixtiraamto.
Inay qadiyadeenu gaadho fagarayeyal badan oo aanay hore u gaadhiin.
Inay qadiyadeenu noqoto mid caalamku xog-ogaal intii hore ka badan u yahay maanta.
Inay abuurmaan dalal badan oo danaynaya gogolna u fidiyay wada hadalada Somaliland iyo Somalia.
Inaan faro-galin lagu samayn karin qaranimada JSL wax walbana lagu dhamaysto wada hadal iyo wada xaajood ku dhisan nabad gelyo iyo is ixtiraam.
Waxaynu kasbanay daneeyayaal cusub oo maalgashi ka bilaabay dhulkeena.
Mahad Eebaa Leh, idina waad mahadsantihiin,,,”
« Halkan ka daawo muuqaalo qurux badan maalintan taariikhiga ah 18 May 2013
Halkan ka daawo video maalintii 18 may 2013 ee gooni-isutaagii jamhuuriyadda Somaliland »